NY ANDRO IZAY NANOKAFAKO NY BAIBOLY
“Faly aho noho ny teninao, tahaka ny mahazo babo be.” Salamo 119:162
“Ny teninao no fahamarinana.” Jaona 17:17
“Naniry hanorina ny fiainako teo amin’ny fahombiazana ara-piarahamonina sy ara-bola aho. Lehilahy lavitrika afaka manao zavatra maromaro miaraka aho. Na izany aza anefa dia tsy afa-po aho, feno tebiteby, ary tsy nety niaiky fa tao ambadik’izany endrika ivelany izany dia tsy nisy afa-tsy fahafoanana sy famoizam-po. Ary mba hamenoako izany fahabangana izany, dia nikatsaka ireo fahafinaretana tsy lany laniana atolotry ny fiarahamonina misy antsika aho. Nefa tsy nitondra afa-tsy fahadisoam-panantenana sy fangidiana ho ahy izany. Nony tsapako fa simba tanteraka ny fiainako, ka ny fahafatesana sisa no vahaolana, dia nisy zavatra tena mahagaga nitranga tato anatiko.
Tamin’izay andro izay aho dia nanokatra boky iray izay mbola tsy novakiako mihitsy, sady tsy nezahiko hotakarina akory tany aloha, dia ny Baiboly izany. Inona no nambarany tamiko? Ny amin’ny Fahariana, ny amin’ny fitiavan’Andriamanitra ny olona tsirairay. Na dia ny nobeazina ara-pivavahana aza aho, dia tsy fantatro hatramin’io andro io izay nampahafantarin’ny Baiboly ahy tampoka: ny loharano niaviana sy ny dikan’ny fiainana, ny hiafaran’ny olona tsy manana an’Andriamanitra, ary ny lanjan’ny asa nataon’I Jesosy Kristy. Takatro fa ny olombelona dia tena mila homboana amin’ilay Andriamanitra Mpahary azy. Azoko tamin’izay fa Jesosy dia tonga mba faty teo amin’ny hazofijaliana, tsy hoe ho an’ny olombelona amin’ny ankapobeny ihany, fa ho ahy manokana indrindra indrindra. Navelako hiditra tao amin’ny fiainako Jesosy, ary nanapa-kevitra ny hanaraka Azy aho. Ary dia nisy fiovana tsy nampoizina nitranga: nahatsapa ny tenako ho afaka tamin’ireo fironana manimba ahy aho, ary niova tanteraka! Norain’I Jesosy mihitsy ny fitantanana ny fiainako. “Jesosy Kristy no tsy miova, omaly sy anio ary mandrakizay” Hebreo 13:8